Waxaan ku dhacay caado aad u xun oo ah inaan u diro emaylka qaar talaabo dhan bil ama ka badan. Waxaan u hayaa nidaam kala sooc emayllada imanaya. Haddii aysan u baahnayn feejignaanteyda deg-degga ah ama ficilkeyga waqti gudahood si looga fogaado xanuunka nooc uun, waxaan u ogolaanayaa inay fadhiistaan. Malaha taasi waa wax xun. Ama maya.
Mawduucan oo dhami wuxuu iga helay inaan la sheekaysto saaxiibkay (dhibbanaha muddadayda "sugitaan") oo ku saabsan sida isticmaalka ama ujeeddada (ama labadaba) e-maylku isu beddelayso. Ma haysto daraasad cilmiyaysan oo aan ku tixraaco halkan. Tani dhammaantood waxay ku saleysan yihiin kaliya indha indhaynteyda sida xiriiriyaha ganacsiga iyo qof kasta oo, sannadihii la soo dhaafay, si dhakhso leh u qaatay tiknoolajiyada cusub. (Anigu ma joogo cirifka hore ee qallooca, laakiin waxaan ku jiraa qaybta hore ee jiirada jilicsan.)
Ka fikir isbeddelka ku yimaada habka aan ula xiriirno dhanka qoraalka. Waxaan ka hadlayaa dadka badan, maahan aqoonta tiknoolajiyadda, habka. Gelinkii hore ee maalintii waxaan dirnay waraaqaha boostada ama telegramka mararka qaar. Waxaan ogaanay sida ugu dhaqsiyaha badan kuwa xawilaadaha iyo howlaha habeenki. Oo waxaa jiray fakis. Markii emaylku yimid, waxaan qornay wax u eg waraaqo? dheer, si sax ah loo calaamadiyey, xaraf weyn, higaada iyo isgaarsiin qaabdhismeed kale leh. Waqti ka dib qaar badan oo ka mid ah emaylladaasi waxay noqdeen kuwa hal saf ku socda. Hadda, waxyaabaha sida SMS, Twitter iyo Facebook waxay na siinayaan gaabis iyo deg-deg noo oggolaanaya inaan ka boodno hal shay ilaa mid kale.
Maxaa noqonaya emaylka? Waqtigaan la joogo, wali waxaan fiirinayaa emaylka foomka dheer, macnaha, hal-ilaa-ka mid ah? wax aniga ama aniga qaataha loola jeedaa shaqsiyan, laakiin aan lagu muujin karin kaliya 140 xaraf. Waliba wali waan u isticmaalaa si aan u raadiyo wararka aan codsaday. Iyo, dabcan, wali waxaan u isticmaalaa inaan kula hadlo dadka aan ku gaadhin fariin kale ama baraha bulshada.
Haddii aan joogo meel u dhow midigta indha indhaynteyda, is-gaarsiinkeenna is-gaarsiintu wuxuu saameyn weyn ku leeyahay suuqgeynta iimaylka. Marka, maxaad u malayn? Meeday emailku? Fadlan ka faallo hoos. Ama, haye, ii soo dir email.